Isticmaalka labada dhinac ee ugu Fiican furaashka guga Joodariga FactoryPrice-Rayson | Rayson
joodariga guga ee jaban
Foam adag ayaa kululaynta jeexjeexa jeebka xayawaanka ee jeexan
Dharka aamusnaanta sariirta ee aamusnaanta habeenkii
R $ $> Rayson ee aagga warshadaha Rayson, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Waxyaabaha ugu Muhiimsan Labada Dhinac Isticmaal Joodariga guga Warshad Furash-Rayson
Badeecadani ma aha oo keliya waxyaabaha la dhigayo meel bannaan laakiin dhab ahaantii way dhammaystireysaa boos. - Ayuu yidhi mid ka mid ah macaamiisheena.
Guangdong, Shiinaha (dhul weyne) Sumadda:
Rayson, OEM Adkeysiga:
Jilicsan / Dhexdhexaad / Adag Ereyga ganacsiga:
EXW, FOB, CIF, Albaab ilaa Albaab Nooca Shirkadda:
Warshad, Soo-saar Dhar:
dhar tolmo leh Codsiga:
Guri, huteel, aqal Muddada lacag bixinta:
TT / LC, 30% DEPOSIT LOO BIXIN DOONO KAhor, 70% QIIMAYNTA LOOGU TALAGALAY KOOBOOYINKA DUKUMENTIYADA SHAQAYNTA EE KU JIRO 7 MAALMO SHAQO Rayson Global Co., Ltd waa shirkad wadaag ah oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 oo ku taal Shishan Town, Foshan High-Tec
Waxaan si adag u raacnaa nidaamyada xakamaynta tayada heerarka si loo hubiyo in alaabooyinkeenu ay la kulmaan ama ka sarreeyaan rajooyinka macaamiisheena Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa adeegyo iib ah kadib iibka macaamiisha adduunka oo idil. Ka dib sanado badan oo horumarineed, waxaan la sameynay xiriiro iskaashi muddo-dheer macaamiisheenna adduunka oo idil. Fadlan isdaji oo hubi inaan xaq u leenahay inaan dhoofino alaabteena wax dhibaato ah oo kudhaca alaabada la keenay. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa baaritaankaaga iyo wicitaankaba. Iyada oo khadadka wax soo saarka oo dhammeystiran iyo shaqaale khibrad leh, Rayson uu si madax-bannaan u qaabeyn karo, u horumarin karo, u soo saari karo, una tijaabin karo dhammaan badeecadaha si hufan.
Mudo intee le'eg ayay joodarigaagu soconayaa? Joodar walba wuu ka duwan yahay. Haddii aad tuurto habeenkii ama aad ku soo toostid xanuun waa waqtigii aad heli lahayd furaash cusub iyada oo aan loo eegin da'da. Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso sumadda sharciga oo aad bedesho ugu yaraan sideed sano kasta. Qaababkee lacag-u-bixinta ah ayaad aqbashaa? LC aragtida / TT, 30% Deposi iyo 70% dheelitirka ayaa ka soo horjeedda nuqullada dukumiintiyada dhoofinta ee witinin 7 maalmood oo shaqo ah. 1. Kartoon ku dheji dusha sare ee qolkaaga jiifka, si taxaddar leh u soo saar furaashka oo sariirtaada dul dhig.
2. Si taxaddar leh u jar bacda kore maqas adoo hubinaya inaadan ka goyn caagga xun ee gudaha ama joodariga, ha ku dacweyn mindi. 3. Ku dul jiifso sariirtaada sariirta sariirta huwatay 4. Si taxaddar leh u jar bacda oo ay weheliso saacadda sida furaashku markiiba u bilaabmayo inuu burburo, Ka saar bacda balaastigga ah. 5. U oggolow 24 saacadood furaashkaaga cusub inuu si buuxda u ballaadho. Xirxirida
1.Flat lagu riixay santuuq alwaax ah
2. Iskuday kartoon ama warqad kraft ah